मार्केट – Page 33 – Lokpati.com
अमेरिका नेपाली काँग्रेस राशिफल अपराध पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड केपी शर्मा ओली प्रचण्ड प्रधानमन्त्री सरकार पक्राउ मृत्यु नेकपा चितवन नेपाल प्रहरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
आयल निगमले ग्यास व्यवसायीलाई वार्षिक ९६ करोड कमिसन थप दिने
काठमाडौं, ११ वैशाख । आयल निगमले ग्यास उद्योगीलाई वार्षिक करिब ९६ करोड रुपैयाँ कमिसन दिने भएको छ। कमिसन वृद्धिको माग गर्दै ग्यास उद्योगीहरु विरोधमा उत्रिएपछि निगमले थप ९६ करोड रुपैयाँ कमिसन दिने निर्यण गरेको हो । उद्योगीहरुले विरोध गरेपछि…
एनसेल पुग्यो सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं, ९ वैशाख । असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निवेदन लिएर एनसेल सर्वाेच्च अदालत पुगेकाे छ। सरकारले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेको भन्दै एनसेल सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हाे। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर नमिलेको भन्दै एनसेल…
काठमाडौं, ८ वैशाख। साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ तोलामा ५९ हजार १०० मा कारोबार भइरहेको छ। साताको अन्तिम दिन शुक्रबार पनि छापावाल सुन सोही मूल्यमा करोबार भएको थियो।यस्तै तेजावी सुन तोलमा ५८ हजार ८०० मा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै चाँदी…
के नेपालले विश्व बजारमा खानेपानी बेच्न सक्छ ?
काठमाडौं। शुक्रबार दिउँसो खानेपानी मन्त्रालयको सभाहलमा कर्मचारी, पत्रकार र व्यवसायी लगायत खानेपानीसँग सम्वद्ध व्यक्तित्वहरुको भेला बोलाइयो। भेलाको एजेण्डा थियो, नेपालको खानेपानी विश्व बजारमा कसरी बेच्ने ? काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको…
‘कानूनीरुपमै खुल्लामञ्चमा सटर भाडामा लिएका हौं’: व्यवसायी
काठमाडौं, ६ वैशाख । व्यवसायीहरुले काठमाडौंको खुल्लामञ्चको बसपार्कमा आफूहरुले कानूनी तवरले नै सटर भाडामा लिएको बताएका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले यस्तो दाबी गरेका हुन् । केही दिनअघिमात्रै खुल्लामञ्चमा…
खानेपानीमा नेपालले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ : मन्त्री मगर
काठमाडौं । मूख्यतः हिमालबाट बगिरहेको पानी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरी बिक्री गर्ने योजना बनाउँदै खानेपानी मन्त्रालयले आज शुक्रबार मन्त्रालयमा बृहत अन्तक्र्रिया गरेको छ । नेपालको अन्य देशहरुसँग बढिरहेको व्यापार घाटा कम गर्ने र…
बैशाख १७ देखि कालिगण्डकी महोत्सव
गुल्मी, ६ बैशाख । गुल्मी जिल्लाको सदरमुकामदेखि पूर्वी भेगमा पर्ने ग्रामीण क्षेत्रमा पहिलोपटक महोत्सव हुनेभएको छ। कालिगण्डकी गाउँपालिकाको आयोजना तथा कालिगण्डकी युवा क्लव कालिगण्डकी गाउँपालिका चार को सहआयोजनामा यहि बैशाख १७ देखि २८ गते सम्म…
आज ह्वातै घट्यो सुनको मुल्य, कति पुग्याे ?
काठमाडौं, ४ बैशाख । बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला सुनको भाउ रु ३०० ले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार प्रतितोला ५९ हजार ६०० मा कारोबार भएको सुनको भाउ बुधबार…
खुलामञ्च भूमाफियाहरुको व्यापारिक थलो हो ?
काठमाडौ‌ं, ०३ वैशाख । राजधानीको मुटु भनेर चिनिने खुलामञ्चमा बिना टेन्डर, बिना बिल भरपाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटरहरुको निर्माण गरेर करोडौं रकमको हिनामिना गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यापार व्यवसायी संघले कडा आपत्ति जनाएको छ ।…
प्रतिगोटा तीन रुपैयाँले घट्यो अण्डाको मूल्य
चितवन, ३ बैशाख । अण्डाको मूल्य प्रतिगोटा तीन रुपैयाँले घटेको छ । अण्डाको बजार सन्तुलन कायम राख्न सोमबारदेखि लागु हुने गरी मूल्य घटेको छ । नेपाल अण्डा उत्पादन संघले अण्डको मूल्य प्रतिगोटा तीन रुपैयाँ घटाएको हो । यसअघि प्रतिगोटा १३ रुपैँया…